Holtop Modular Air Mma Chiller na Okpomọkụ mgbapụta
Holtop modular Air mma C ...
Mkpokọ Elu Ikuku Condit ...
Single Room Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na Du ...
Airwoods N'uko ikuku purifier
Jikọtara Ikuku Ijikwa Units
Holtop Modular Air Cooled Chillers bụ ngwaahịa anyị kachasị ọhụrụ nke dabere na ihe karịrị afọ iri abụọ nke nyocha na mmepe na mmepe, mkpokọta teknụzụ na ahụmịhe nke na-enyere anyị aka ịzụlite chillers na arụmọrụ kwụsiri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya, nke ọma na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ikuku ọkụ. N’ụzọ dị otu a, ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji chekwaa ike, kpuchido gburugburu ebe obibi ma nweta usoro ikuku ikuku dị mma.
Zitere anyị email Peeji PDF Download
Katalọgụ: Holtop Modular Air Mma Chiller (Igwe mgbapụta)
Nchịkọta Ngwaahịa ：
Holtop Ikuku Modular Chiller dị nke anyi kacha ọhụrụ ngwaahịa dabere na gafee afọ iri abụọ nke nyocha & mmepe oge niile, nchịkọta nkà na ụzụ na ahụmịhe nke na-enyere anyị aka ịzụlite chillers na mụ & pụrụ ịdabere na arụmọrụ, ukwuu mma evaporator & condenser okpomọkụ nyefe arụmọrụ. N’ụzọ dị otu a, ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji chekwaa ike, kpuchido gburugburu ebe obibi ma nweta usoro ikuku ikuku dị mma.
Holtop Ikuku Ikuku Ikuku Chiller jiri ikuku dị ka isi jụrụ oyi na mmiri friji dị ka ihe jụrụ ajụ maka nkeji ikuku ikuku etiti. Usoro ngwaahịa a nwere ụdị nkọwa dị iche iche jụrụ ike sitere na65 ka 130 kW na ikike ikpo oku sitere na 71 ka 141 kW. Ọ nwere ike izute ina dị iche iche ibu na FCU na Jikọtara ụdị AHU si wdg ọnụ ngwaọrụ mejupụtara dị iche iche Central ikuku-oyi usoro nke nwere ike izute ụlọ jụrụ chọrọ. Units nwere uru nke kọmpat Ọdịdị, elu arụmọrụ, ala mkpọtụ na ogologo ndụ, adaba ọrụ wdg O nwere ike inye nile di iche iche nke Central ntụ oyi usoro na Filiks na chilled mmiri. Holtop Modular Air Mma Chiller nwere ike ọtụtụ-eji hotels, hisi, sna-amasi mniile, ookpukpu buildings, cinemas, mụlọ ọrụ etal, oIL & cokpu indoko, manufacturing indoko, enkuzi indoko, electric ike ụgbọ wdg.
1. Integrated Nchedo ：Mepụta ihe karịrị ọrụ nchedo nchekwa 10, nke nwere ike ịgba mbọ hụ otu chiller na sistemụ arụmọrụ na nchekwa niile. Enwere ike ịchịkwa ngalaba ahụ site na usoro nlekota oru na-agbanwe agbanwe iji hụ na otu nwere arụmọrụ na arụmọrụ.
2. Wide okpomọkụ nso nke Ngwa, Ichegbu onwe-free nke Ọrụ ：Chiller unit kwesịrị ekwesị maka ọrụ na a mbara n'èzí okpomọkụ nso, si -20 ° C ~ 48 ° C.
3. Chiller Unit Ọrụ Mgbe Nsogbu: A otu unit e mere na otutu compres. Mgbe otu n'ime ndị compres dara, ndị fọdụrụ nke compressors na usoro ka nwere ike ịrụ ọrụ na-ejikarị na-enweghị na-emetụta ọrụ nke usoro ihe niile.
4. Modular Nchikota: Chiller na - anabata ụdị ngwakọta modulu na ọ dịghị mkpa ịtọ ntọala nna ukwu ma ọ bụ obere ọrụ. Ngwakọta ọ bụla nwere ike ijikọta nkeji nke 16, ọbụlagodi ha bụ ụdị dị iche iche, iji mezuo mgbanwe dị iche iche nke ụlọ dị iche iche.
5. Nzọụkwụ Malite: Na-amalite nkeji niile na usoro, iji belata mmalite mmalite, belata ujo ahụ na ike grid, ma zere imetụta nchebe nke akụrụngwa eletriki ndị ọzọ.
6. Mgbanwe Ngwa: Ulo oru: Tinye ụyọkọ nkeji n'ime oge ọ bụla, dabara adaba maka ọtụtụ ntinye ego. Gbọ njem: Olu nke otu ọ bụla dị kọmpat, enwere ike ibuga ya n'otu n'otu, achọghị kreenu na saịtị ahụ, nwere ike ịchekwa ụgwọ njem. Echichi: Ọ dịghị mkpa ime ụlọ igwe ma ọ bụ sistemụ mmiri jụrụ oyi, naanị ebe nwere ezigbo ikuku. Emere paịpụ mmiri ahụ n'otu akụkụ, nke nwere ike ịdị mfe maka njikọ mmiri jikọtara ma chekwaa ebe echichi. Sistemụ: Na sistemụ na-ekesa mmiri, ma e wezụga usoro eji eme ihe mgbe niile, ọ bụ nhọrọ iji mgbapụta isi na sistemụ na-agbanwe agbanwe, yana njikwa njikwa ọsọ na-agbanwe agbanwe bụ nhọrọ ịhọrọ.
7. Smart defrosting usoro: Site n’inyocha usoro dị iche iche dị iche iche iji nwee ikpe ziri ezi banyere ọnọdụ nke ịjụ oyi, onye chiller n’onwe ya nwere ike ịhọrọ oge kachasị mma iji banye ma ọ bụ wepu ọpụpụ, iji zere ezughị oke ma ọ bụ karịa iwepu mmiri. Na a duplex usoro, na nkeji nwere ike nweta ọzọ defrosting. Mgbe kpo oku n'okpuru oke ọnọdụ okpomọkụ dị ala, ịtọ ntọala ntuziaka maka ịrụ ọrụ ka mma.
8. Ọgụgụ PLC Control System: Usoro njikwa PLC jikọtara ịdị mfe na ịdị mma nke sistemụ njikwa wired na uru nke sistemụ njikwa otu jikọrọ iji nweta njikwa chiller. Otu njikwa njikwa PLC nwere ike ijikwa otu 1 ruo 8. Otu ọ bụla nwere ike ijikwa mkpụrụedemede 1 ruo 16 nke chillers modular. Usoro a nwere ike ijikwa chillers modular 128. Usoro nchịkwa na-anapụtakwa atụmatụ dị iche iche dị ka mgbanwe ọnọdụ otu, mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ, njikwa ngbanyụ / ngbanwu, wdg iji were ọtụtụ ngwa.
9. Free Access ka owuwu akpaaka System: Standard RS485 ụlọ nkwurịta okwu interface na-abịa na-emeghe ohere ọkọlọtọ ModBus nkwurịta okwu protocol. Ngwaọrụ a nwere ike jikọọ ya na sistemụ njikwa ụlọ (BAS) maka njikwa etiti, dị mfe iji nweta njikwa ọgụgụ isi, zere ike na-enweghị isi, ma chekwaa ụgwọ ọrụ ikuku ikuku.
Model / nkọwapụta HFW-65HA1 HFW-65HA1-L HFW-130HA
Temperaturedị okpomọkụ nkịtị -Dị okpomọkụ dị ala Temperaturedị okpomọkụ nkịtị -Dị okpomọkụ dị ala
Elu ọnụ na-ajụ ikike (KW) 65 63 130 130
Elu ọnụ kpo oku ikike (KW) 71 71 142 141
Jụrụ Ike akara ngosi zuru oke (KW) Obochi 19.5 Ogugu 18.7 39 37.7
Kpo oku Ike akara ngosi zuru oke (KW) 21 Obochi 19.5 42 38.8
Elu ọnụ ala-okpomọkụ jụrụ ikike (KW) / 52 / 100
Onu ogugu na-eme ka ikike ikpo oku di elu (KW) / 18.6 / 37
Voltaji 380V / 3N ~ / 50Hz
Igwe nju oyi R410A
Akụkụ ọka Kọmputa gbasaa valvụ
Compress .Dị Akwụkwọ mpịakọta Hermetic
Fan .Dị Axial ala mkpọtụ ofufe
Ike (kw) 0.9 * 2 1.5 * 2
Airside okpomọkụ Exchanger Airflow (m³ / h) 14000 * 2 19500 * 2
.Dị Nnukwu arụmọrụ ọkụ ọkụ gbanwere
Waterside okpomọkụ Exchanger Elu mmiri mmiri (m flow / h) Ugboro 11.5 Ugboro 11.5 Ogbe 22.5 Ogbe 22.5
.Dị Akwa-oru oma shei & tube okpomọkụ Exchanger
Mmiri mgbali mmiri (kPa) 30 40
Ntinye njikọ mmiri / ntaneti njikọ DN50 DN65
Akụkụ W * H * D (mm) 1810 * 960 * 2350 2011 * 1100 * 2300
Net arọ (n'arọ) 580 600 1000 1050
Nke gara aga: Rooftop Packaged Air Conditioner
Osote: Holtop DC Inverter DX Ikuku Ijikwa Ikuku
Usoro ikuku Chiller
Ikuku Chiller Sistem
Igwe Chilled Water Unit
Igwe Igwe Chiller Na-eme Ka Igwe
Usoro Modl Chiller
LHVE Series adịgide Igwe Ọdụdọ Synchronous Freque ...
Mmiri-mma ịghasa Chiller